Wararkii ugu dambeeyay qaraxii ka dhacay kaawa godeey Muqdisho • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Wararkii ugu dambeeyay qaraxii ka dhacay kaawa godeey Muqdisho
Wararkii ugu dambeeyay qaraxii ka dhacay kaawa godeey Muqdisho
Xog dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax xoogan oo duhuradii maanta ka dhacay Xaafada Kaawa-Goodey ee degmada Wadajir kaasoo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay.
Qaraxa oo la sheegayo in uu geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ayaa wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in badi dadka ku waxyeeloobay ay yihiin dad rayid ah.
Ilaa hada inta la xaqiijiyay 10 ruux ayaa ku geeriyootay qaraxa halka 15 kalena ay ku dhaawacmeen sida ay xaqiijiyeen laamaha caafimaadka magaalada Muqdisho.
Inta badan dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay qaraxa ayaa la sheegay in ay ku sugnaayeen suuq aad u mashquul badan taasoo ka dhigtay in tirada dadka ku waxyeeloobay qaraxa ay kororto mar marka ka dambeysa.
Dowlada Soomaaliya oo war kasoo saartay qaraxa waxa ay sheegtay in ciidamada amaanka ay gacanta ku dhigeen darawalkii kaxeynayay gaariga qarxay maadama uu ka badbaaday sida uu sheegay wasiirka amniga soomaaliya.
Si kastaba qaraxan ayaa kusoo beegmay xili maanta weerar iyo qaraxyo isxig xigay lagu qaaday xarun uu magaalada Gaalkacyo ka daganaa Cabdiweli Cilmi yare oo ahaa nin aaminsanaa dariiqad diimeed kaasoo ugu dambeyn alshabaab ay sheegteen in ay dileen.